Dr. Mararaa Guddinaa: ''Foyya’iinsa malee filannoo taasisuun biyya kana jeeqa'' - BBC News Afaan Oromoo
Ministirri Muummee Abiy Ahimad (PhD) guyyaa kaleessaa hoggantoota paartilee garaa garaa lakkoofsaan 81 ta'an waliin waajjira isaaniitti dhimma ''dhaabbilee dimookiraasii ijaaruu'' irratti mari'ataniru.
Ministirri Muummee filannoo waggaa fi ji'a muraasa booda gaggeeffamu ifaa fi bilisa ta'en akka raawwatu akka hojjetan hoggantoota paartilee dhiheenya biyyatti deebi'anif mirkaneessaniiru.
Dhaabbilee mormituu lakkoofsaan hedduu ta'anis osoo gad-xiqqaatani deeggarsa taasisuuf caalaatti akka mijatuf kan dubbatan.
Dhimma boordii filannoo, hanga filannoon dhufutti mariin mootummaafi paartilee gidduutti eegale akka itit fufuufi gahee dhaabbileen mormituu qabanirrattillee marii jabaa taasisaniiru.
"Uummata yeroo qeensa buqqisan hin mariisisiin keessa dhokachuuf yaalu"
Egeree paartilee siyaasaa Oromoo: 'Diimokiraatiikii fi Rippablikaan'
Dura taa'aan Kongirasii Federaalistii Oromoo (KFO) Mararaa Guddinaa (PhD) mariin eegaluun isaa bareeda akka ta'e kaasuun garuu marii qofaan bira darbuu akka hin feene dhaamu.
'Mariirra kan darbe'
''Karaa keenyaan marii duwwaadhaan bira darbuun hinrakkisa. Marii bira darbee rakkoo biyya kanaa bal'aa negotiation (waligalteerra gahuuf marii taasifamu) mootummaa waliin dubbachuu barbaanna'' jedhu.
Kanaan dura ''mootummaa waliin dubbanna jennee kan galchine qabxiiwwan 17 turan'' kan jedhan gameessi siyaasaa kuni dhimmoota ijoo irratti mari'achuu fedhan himu.
''Dubbii seera filannoo gubbaatti, seera manni murtii biyya kanaa akka hojjetaa jiru gubbaatti, miidiyaan akkatti bilisa ta'u gubbaatti fa'i galchine.''
Qabxiiwwan 17 keessaa dhimmi namoonni hidhaman haa hiikaman jedhuufi Labsiin Yeroo Muddamaa haa ka'u jedhu deebii argachuu isaa kaasu.
Ministirri Muummee dhimmoota mootummaa waliin paartileen mari'achuu fedhan gama Boordii Filannoo biyyaalessaatti akka galchan gaafatanin Dr Mararaan illee ''Deebifnee isuma galchuun keenya waan oolu miti,'' jedhaniiru.
Filannoo Biyyaalessaa waggoota lamaa gadi gidduutti adeemsifamu dheeressuuf hanga yoonaa yaada akka hin qabne, yaadi isaa paartilee morkattootaa irraa dhufnaan garuu irrati mari'achuuf mootummaan qophii ta'uu MM Abiy Ahimad dubbataniiru.
Dhimma filannoon walqabatee ka'us Dura Taa'aan KFO ''Nuti borus iftaanis yoo ta'e rakkoo hinqabnu filannaa keessa seenuudhaaf'' jechuun dubbatu. Garuu, wanti sirraa'u jira yaada jedhu qabu.
''Yeroorra kan nuti barbaannu waliigalteedha. Ji'a jaha dabaluun hin danda'ama isamiti rakkoon keenya.
''Waligaltee gubbaa gahuu dandeenyaayi? Filannoo dhugaa ta'e bilisa ta'e nama bilisa ta'eeni qaama bilisa ta'en gaggeessuun hin danda'amaayi kan jedhudha.''
Yoo mootummaafi dhaabbilee mormituu gidduutti walamanteen dhibe garuu filannoon inumaa rakkoo fida jedhaniiti amanu.
''Filannoon walqabate kun fooyya'u malee filannaa gaggeessun biyya kana jeequu dhumatti yoo deemen malee bu'aa guddaa hinqabu jenneeti amanna.''
MM Abiy Ahmad erga gara aangootit dhufani as tarkaanfiiwwan siyaasa diinagdee fudhataniin gurra guddaa horataniiru.